ỊWỤNYE WINDOWS 10 NA MAC SITE NA IJI BOOTCAMP - WINDOWS - 2019
Ịwụnye Windows 10 na Mac site na iji BootCamp
Ụfọdụ ndị ọrụ Mac ga-achọ ịnwale Windows 10. Ha nwere atụmatụ a, ekele maka ụlọ BootCamp ahụ.
Wụnye Windows 10 na BootCamp
Iji BootCamp, ị gaghị efu ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nhazi ahụ dị mfe ma enweghị ihe ize ndụ. Ma rịba ama na ị ga-enwerịrị OS X dịkarịa ala 10.9.3, 30 GB nke ohere ohere, iko USB USB n'efu na onyinyo na Windows 10. Ọzọkwa, echefula iji ndabere na-eji "Machine Machine".
Chọta usoro usoro achọrọ na ndekọ "Mmemme" - "Ntuziaka".
Pịa "Nọgidenụ n'ihu"iji gaa nzọụkwụ ọzọ.
Tinye akà rà "Mepụta nkwenye disiki ...". Ọ bụrụ na ịnweghị ndị ọkwọ ụgbọala, wee lelee igbe ahụ "Download software kachasị ọhụrụ ...".
Fanye ngwa mkpo ọkụ, wee họrọ ihe oyiyi usoro ọrụ.
Kwekọrịta ịhazi usoro mkpo ọkụ.
Ugbu a, a ga-agwa gị ka ịmepụta nkewa maka Windows 10. Iji mee nke a, họrọ ọ dịkarịa ala 30 gigabytes.
Ọzọ, windo ga-apụta na ị ga-achọ ịhazi asụsụ, mpaghara, wdg.
Họrọ otu nkebi nke e mebere ma nọgide.
Chere ka echichi ahụ mezue.
Mgbe ịmegharịrị, wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa site na ụgbọala.
Iji mepụta usoro nhọrọ nhọrọ, jide ala Alt (Nhọrọ) na keyboard.
Ugbu a ị maara na iji BootCamp ị nwere ike wụnye Windows 10 na Mac.